Ilmi gootaa goota – Welcome to bilisummaa
Ilmi gootaa goota
bilisummaa August 20, 2013	Leave a comment
enyummaa isaa boonsaa
Hidda isaatu hayyuu
waan hunduma dursa.
Jiraadhuu nuuf turi
sumaatu nu boonsaa.
tanaaf dhugaan kaatee
Rakkoo saba keetii
Bofa afaa jalaa
mataa keessa dhooytee
garaa daf nu goote.
Afaan keenya ta’uun
bakka keenya buutee
Gochaan kee nu boonsee
maqaa nutti gootee
Garuu ilmaan Geexee
dhukkuba itti taate.
Kayyoon kee hedduu
kan jalqabaanuu kanaa
If dura si kaayuun
guddoof si abdannaa
Takkallee hin sodaatin
si wajjiin qabsooynaa
Amna kee itti fufi
nutilleen si faanaa!
Kan sabaaf dhaamotu
inni dhugaan namaa
Kan sodaaf hollatu
mee maal isaat himamaa?
Jawaar sabaaf fakkii
Umriin kan kee kichuu
Yaanni kan kee guddaa
Karoorri kee bal’aa
Akka damee Odaa
ololaan hin cabuu
Kaayyoo kee sirriidhaa toorasaarraa hin dabu.
Waan yaadde irraa hin deebitu
Sodaattees hin dheeysitu
Akkuma kanaan itti fufi…
Diina Oromootti karaa cufi
Kan si hordofan hiriirsi
Diina Oromoo baareeysi.
Diina Oromoo wareersi!
Previous Jiituu Dh. Wakjira exposed political suppression and oppression in her story of love, perseverance, resilience and courage
Next ‘Israel behind Egypt coup’ – Turkish PM